Ogaden News Agency (ONA) – Gudoonka Sare Iyo Hawl-Wadeenada Kala Duwan ee Hogaanka Abaabulka Iyo Arimaha Ururka JWXO oo Kulan Khadka Isgaadhsiinta ah Iskugu Yimid.
Gudoonka Sare Iyo Hawl-Wadeenada Kala Duwan ee Hogaanka Abaabulka Iyo Arimaha Ururka JWXO oo Kulan Khadka Isgaadhsiinta ah Iskugu Yimid.
Waxaa maanta kulan heer sare ah iskugu yimid iyadoo la,adeegsanayo qalabka isgaadhsiinta casriga ah ( Tell Conferense) gudoonka sare ee Hogaanka Abaabulka iyo Arimaha Ururka (HAAU). Shirkan oo socday mudo dhawr saac ah ayaa waxaa kuwada kulmay Gudoonka oogu sareeya ee HAAU, Masuuliinta Waaxaha Hogaanka, Iskuduweyaasha Qaaradaha ee HAAU iyo Madaxda Ururada Bulshada Ogadenya sida OYSU iyo OWA (Ogaden Women Association).
Kulankan oo kamid ah kulamadii joogtada ahaa ee Madaxda HAAU ay iskugu imaan jireen ayaa lagu falanqeeyay aadna loogu lafoguray qodobo Halganka Somalida Ogadenya laf dhabar u ah kuwaasoo kusaabsan Qorshe Sanadeedka Hogaanka ee 2015 iyo horumarinta arimaha halganka guud ahaan. Qodobadan ayaa waxaa kamid ahaa warbixin guud oo kusaabsan xaalada halganka taasoo uu soo jeediyay Gudoomiye Kuxigeen Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenya (JWXO) ahna Hogaanka HAAU Dr. Maxamad Ismaciil. Waxaa isna warbixin meelo badan ifinaysa oo kusaabsan xaalada Gumaysiga Itoobiya lawadaagay madaxdii kulanka kasoo qayb gashay Gudoomiye Kuxigeenka Hogaanka HAAU Mudane Xasan Macalin.
Kulankan ayaa kusoo beegmay xilli ay wadaan Hogaanka oogu sareeya ee JWXO abaabul balaadhan oo kusaabsan balaadhinta iyo hirgalinta hawlaha halganka ee kasocda shanta qaaradood ee aduunka. Waxay kaqaybgaleyaasha kulanka si mugwayn leh ooga wada doodeen talooyin wax ku’ool ahna isku waydaarsadeen arimaha kusaabsan wadahadalka udhexeeya JWXO iyo Gumaysiga Itoobiya iyo sidii bulshada Somalida Ogadenya looga haqab tiri lahaa isla markaana loogaadhsiin lahaa shacabka iyo guud ahaan hawl-wadeenada kala duwan ee JWXO xogta dhabta ah ee kusaabsan wadahadalka iyadoo mudnaanta marwalba lasiinayo rabitaanka shacabka Somalida Ogadenya.
Dhanka kale waxaa siqoto dheer leh loogu falanqeeyay aadna looga wada dooday xaalada cusub ee maanta soo foodsaartay Gumaysiga gabalkiisu dhacay ee Wayaanahu hormuudka uyahay ee ka,arimiya Itoobiya. Gumaysiga Itoobiya ayay soo foodsaartay marxalad aad uqalafsan oo kala guur ah iyadoo maanta lagu tilmaami karo inuu gumaysigu cagta saaray jidkii burburka iyo kala yaaca taasoo ay lagama maarmaan tahay in guud ahaan shacabka S.Ogadenya oo isku duuban uu ooga hawlgalo sidii loodardar galin lahaa waxqabadka iyo horumarinta halganka Ogadenya.
Waxaa kaloo kulankan marti sharaf u ahayd Hogaanka Dhaqaalaha JWXO Drs. Cibaado Xirsi Mahad oo lawadaagtay madaxda iyo masuuliinta hogaanka HAAU ee kulanka kasoo qaybgalay qorshaha Hogaanka Dhaqaalaha ee ku aadan sanadkan 2015 iyo qaabkii looga hawlgali lahaa. Waxay Drs. Cibaado aad oogu dheeraatay sharaxaad waafi ahna kabixisay qaabka qorshaha Hogaanka Dhaqaalaha lagu sargooyay iyo sida oogu wanaagsan ee looga hawlgali karo.
Kulamada noocan oo kale ah eey iskugu yimaadaan madaxda Hogaanka Abaabulka iyo Arimaha Ururka ee HAAU ayaa lafdhabar u ah dardar galinta iyo hirgalinta hawle halgameedka uyaala Hogaanka HAAU kaasoo siwanaagsan ooga socda dhamaan xarumaha ay kahawlgalaan Jaaliyaadka Somalida Ogadenya ee kudhaqan dunida dacaladeeda.